China 6m I-LED EPHATHELELAYO ITraki - Ifoto yeAumark mveliso kunye nabenzi | I-JCT
I-6m ye-LED YOKUTHUTHA I-TRUCK-I-Foton Aumark
I-JCT 6m I-LED EPHATHELELEYO YOKUTHUTHA I-TRAKK-I-Foton Aumark E Imodeli: E-W3360 with iguqulwe nge-Foton Aumark chassis kunye ne-LED yangaphandle yokugcina umbala wombala ogcweleyo. Umzimba weloli we-E-W3360 LED MOBILE TRUCK ingaphantsi kweemitha ezi-6, inokuba nelayisensi kwaye iqhutywe.
I-JCT I-6m I-LED YOKUTHUTHA I-TRAKI - Ifoto Aumark（UmzekeloI-E-W3360）iguqulwe nge-Foton Aumark chassis kunye ne-LED yangaphandle-yemibala yokugcina umbane. Umzimba weloli we-E-W3360 LED MOBILE TRUCK ingaphantsi kweemitha ezi-6, inokuba nelayisensi kwaye iqhutywe. Emva kokuba uyilo lwe-chassis yesithuthi esincinci lubhalisiwe kwaye lunelayisensi, inokuhamba ngokukhululekileyo esixekweni ngaphandle kwefuthe elibi lokungxamiseka kwendlela kunye nokuvalwa kwendlela. I-Jingchuan E-W3360 I-LED MOBILE TRUCK ixhotyiswe ngenkqubo yokudlala yemultimedia, ixhasa ukudlala kwe-U disk, kwaye ixhasa ifomathi yevidiyo eqhelekileyo. Ibe sisiphelo sentengiso esinokuhamba ngokukhululekileyo, sitshintshe ulwazi, iindlela zonxibelelwano kunye neendawo nangaliphi na ixesha. Idlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni imveliso kwaye itsala abathengi. Sisiphatho esitsha sothungelwano sentengiso esidibanisa intengiso, ukukhutshwa kolwazi kunye nosasazo ngqo. Kukhetho lokuqala lwabasebenzisi ukukhuthaza.
Incinci kwaye ibuthathaka, kodwa ayilula
Nangona ilori encinci encinci kunye ne-chassis encinci yamkelwe, i-100% yamaqonga amajelo osasazo azuzwe kwilori enkulu: 6.2m2 i-LED umbala wemibala egcweleyo, iscreen esinye somtya obomvu, ibhokisi ekhanyayo, eguqukayo kwaye elula.
Ukulungiswa komsebenzi kuhambelana nabantu
I-6m ye-LED EPHATHELELEYO YETROLK isebenzisa inkqubo yolawulo olusebenzayo eyakhelwe-ngaphakathi, ekulungele ngakumbi ukugcinwa nokusebenza; Umnyango osecaleni ovulekileyo, iileli ezinokususwa kunye nolunye uyilo lomntu, kunye nokubekwa kwenkqubo yokusebenza kombane, kuyenze ibe sengqiqweni ngakumbi kwaye ikhuseleke, isebenziseke lula.
Ukophula ulawulo, iSixeko sizinikele
Emva kokuba uyilo lwe-chassis yesithuthi esincinci lubhalisiwe kwaye lunelayisensi, inokuhamba ngokukhululekileyo esixekweni ngaphandle kwefuthe elibi lokungxamiseka kwendlela kunye nokuvalwa kwendlela. Iyaqonda ngokwenyani intengiso ehamba nayo kwaye iya nzulu kwikona nganye yesixeko.
Umgangatho we-Eu, ukhuselo lokusingqongileyo lwekhabhoni ephantsi
Ngokuhambelana nemigangatho yamazwe aphesheya, i-chassis yeloli ehlangabezana ne-Euro Euro / / Euro standards imigangatho yokukhutshwa yamkelwe ngokufanayo, enokonga amandla, inciphise ukungcola, kunye nokunciphisa izithintelo kokusingqongileyo.
Inkqubo yeparameter (esemgangathweni)
1. Ubungakanani ngokubanzi: 5995 * 2190 * 3300mm
2.Ubungakanani bebala elipheleleyo lombala obonisa i-LED (P6) ubungakanani: 3520 * 1920mm
3. Isikrini sokubonisa esibomvu esingaphandle sangaphandle (P10) ubukhulu: 3520 * 320mm
4. Isikrini esingaphandle esibomvu esibonisa ngaphandle (P10) ubukhulu: 1280 * 1440mm
5.Ukuxhotyiswa ngenkqubo yedijithali yedijithali, inokudlala imifanekiso emi-4 emile kwintengiso kwiluphu.
6.Ukusetyenziswa kwamandla (umyinge wokusetyenziswa): 0.3 / m / H, ukusetyenziswa komndilili opheleleyo.
7. Exhotyiswe ngenkqubo yokulungisa ividiyo yangaphambi kokusasazwa ngqo okanye yokusasazwa kwakhona kunye nemidlalo yebhola, kukho iindlela eziyi-8, kwaye isikrini sinokutshintshwa ngokuthanda.
8. Amandla exesha okrelekrele kwinkqubo anokuvula okanye acime isikrini se-LED.
9, ixhotyiswe ngenkqubo yokudlala kwimultimedia, ukuxhasa u-U ukudlala idiski, ukuxhasa ifomathi yevidiyo eqhelekileyo.
10. Ifakwe iseti ye-generator ethe cwaka, amandla 8KW.
11. Igalelo lombane yi-220V, ukuqala kwangoku ngama-25A.
E-W3360（I-6m I-LED YOKUTHUTHA I-TRAKK-Ifoto Aumark）
Igama lebrand Ifonti yeAumark Ubungakanani bangaphandle 5995mm * 2190mm * 3300mm
Amandla Cummins Ubunzima bebonke 4495KG
Imigangatho yokukhutshwa EuroⅤ / Euro Euro Ukunciphisa ubunzima 4250KG
Isiseko sevili 3360mm Sihlalo Izihlalo ezi-3
Ubungakanani besikrini 3200 * 1920mm Phaya Pitch P3 / P4 / P5 / P6
Umsebenzi wobomi Iiyure eziyi-100,000
Isikrini sebar ye-LED
Icala led Screen Size 3200mm * 320mm Ubungakanani besikrini obukhokelwe ngasemva Ubukhulu: 1280mm * 1440mm
Phaya Pitch 10 mm Ukuqaqamba 5000cd / m²
Ibhokisi yokukhanya eyiRoller
Ubungakanani beCanvas 3100mm * 1500mm Roller Ububanzi 75 mm
Amandla eMoto ≥60W Iindlela zolawulo Isilawuli esikrelekrele
Inani leiisilinda Amanzi apholileyo asemgceni 4-isilinda
Ukusetyenziswa kwamandla okumndilili
Inkqubo yoLawulo lweMultimedia
Ukubeka iliso Inkxaso yeendlela ezi-8 zokufaka umqondiso
Isidlali semidiya Ngeentlobo ezahlukeneyo zesidibanisi sevidiyo esisetyenziswayo, zibekhona kwiPC, ikhamera njl.
Egqithileyo I-JCT 9.6M ye-LED ISITATIMU SOKUGQIBELA I-TRUCK-Foton Aumark
Okulandelayo: I-6m ye-LED EPHATHELELAYO ITraki-Nanjing YueJin
Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile
Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile For Sale
Mobile Led Advertising Iinkuphelostencils
Iselfowuni eLijongene neBillboard Truck
Mobile Ngokukhokelwa Screen Iinkuphelostencils
I-6M MOBILE I-TRUCK YE-LED-Foton Ollin
22㎡ IBHODI YEBHODI YOKUTHUTHA-ISUZU
I-6M EBHANELEKILEYO ILORI YOKUGQIBELA-IVECO
6m Mobile Exhibition Iinkuphelostencils-foton Aumark
Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile For Sale, Mobile Led Advertising Iinkuphelostencils, Iselfowuni eLijongene neBillboard Truck, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile, Ekhokelwayo Inqwelo erhuqwayo, Mobile Ngokukhokelwa Screen Iinkuphelostencils,